What if you don't do Business Planning? — Balance Professional Services
What if you don't do Business Planning?
Business Plan မဆွဲတော့ ဘာဖြစ်မလဲ?
Business Plan (စီးပွားရေး စီမံချက်) မဆွဲရင်?
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အားနည်းချက်ထဲမှာ Business Plan မရှိတာလည်း ပါပါတယ်။ မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေရဲ့ 90% လောက်က Business Plan မရှိကြပါဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာ အချက်တစ်ခုက Business Plan လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း မသိကြ၊ လက်မခံကြပါဘူး။ ငါတို့အဖိုးတွေ၊ အဖေတွေ လက်ထက်ကတည်းက ဒီအတိုင်းလုပ်လာတာ အဆင်ပြေနေတာပဲ ဆိုပြီး ရေစီးနဲ့မျောလိုက်နေတတ်ကြပါတယ်။
အရင်တုန်းက အဆင်ပြေရင် ပြေနေပေမယ့် အခုလိုစနစ်ကျတဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံကောင်းမွန်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ ရေရှည်မှာကိုယ်က Business Plan မရှိတဲ့အတွက် တစ်ပန်းရှုံးပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Business Plan ဘာလို့လိုအပ်သလဲ?
သင်ဟာ Business Plan ဆွဲဖို့မလိုဘူးဆိုရင် အရင်ဆုံးဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ပါ။
စားသုံးသူတွေ/ သုံးစွဲသူတွေ ဘာလိုအပ်နေသလဲ?
လုပ်ငန်းစတင်ဖို့နဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင်လည်ပတ်ဖို့ အရင်းအနှီးဘယ်လောက်လိုလဲ?
သင်သာ Business Plan သေချာဆွဲထားရင် အပေါ်က မေးခွန်းတွေဟာ အသေးအမွှားဆိုတာ ချက်ချင်းသိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Business Plan (မြန်မာလိုဆို လုပ်ငန်းရဲ့ စီးပွားရေး စီမံချက်) ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြရင် ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန်/ ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ အခြေခံအချက်အလက်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေတွေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ၊ ပန်းတိုင်ကို ဘယ်လိုရောက်အောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အစီအစဉ်တကျ ဖော်ပြပေးထားတဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း ရှင်သန်ဖို့၊ လည်ပတ်ဖို့နဲ့ တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ လိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ Strategies တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို ခြုံငုံဖော်ပြပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို Business Plan ထဲမှာ ဘာတွေပါသလဲ? ကျွန်တော်တို့ အကျဥ်းချုံးပြီး နံပါတ်စဥ်နဲ့ပြောကြည့်ရအောင်
Executive Summary, စီမံကိန်း၏အဓိကအချက်အလက်များရဲ့အကျဥ်းချုံး
Mission Statement, မိမိ ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
Company Background, လုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီရဲ့ နောက်ကြောင်း
Product Description, မိမိ ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း
Marketing Plan, စျေးကွက်ရှာဖွေမည့်အစီအစဥ်
Competitor Analysis, ပြိုင်ဘက်များကိုလေ့လာချက်
SWOT Analysis, အားသာချက်-အားနည်းချက်-အခွင့်အလမ်း-ခြိမ်းခြောက်မှုများလေ့လာချက်
Operations, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံ အစီအစဥ်များ
Financial Planning, ဘဏ္ဍာရေးစီမံချက်
Business Plan ကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကို အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ဘဏ်ချေးငွေတွေ၊ SME Loan တွေလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း Business Plan ကအရေးကြီးပါတယ်။ Business Plan ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင် Loan တွေရနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ Business Plan ကောင်းကောင်းမရှိပဲနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေ၊ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ အခြေအနေ၊ ကိုယ့် Business Idea အလုပ်ဖြစ်နိုင်/ မဖြစ်နိုင်ကို ခန့်မှန်းသုံးသပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ Business Plan ဆိုတာက အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ အနာဂါတ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဖော်ပြပေးတာတင်မဟုတ်ပဲနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါ တိတိကျကျ သိစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ Strategy တွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေခံအချက်အလက်၊ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်တွေကို Business Plan ကဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ Business Plan ရဲ့ Financial Planning (ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း) အပိုင်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Budget တွေတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေအပြင် လစဉ်ငွေလည်ပတ်မှုများကို စီမံရာတွင်လည်း အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဥ်မှာ လိုတဲ့ Business Plan
Business Plan ဆိုတာကတစ်ခါရေးဆွဲပြီး အမြဲတမ်းမပြောင်းလဲပဲ ဆက်သွားရတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲရတဲ့ Plan တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်တာနဲ့ Business Plan ကိုလစဉ်၊ နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ရည်မှန်းချက်အသစ်တွေ တိုးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ မလိုအပ်တော့တာတွေ ဖြုတ်တာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်ပါတယ်။
Sale Forecasting (ရောင်းအားခန့်မှန်းခြင်း)
လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ် update လုပ်သင့်တဲ့ Business Plan ရဲ့ အဓိကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကတော့ Sale Forecasting ပါပဲ။ Sale Forecasting ဆိုတာက အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်းရဲ့ Product တွေ၊ Services တွေရဲ့ ရောင်းအားခန့်မှန်းခြေနဲ့ အဲဒါတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးအမြတ်ဘယ်လောက်ထွက်မယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းတာပါ။ Forecast လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောသဘာဝတွေ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အကြောင်းအချက်အလက်တွေ၊ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေ၊ Customers တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ Feedback တွေကိုအခြေခံပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။
Business Contingency Planning (အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် Plan ချထားခြင်း)
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့၊ တိုးတက်ကြီးထွားဖို့၊ အမြတ်အစွန်းများဖို့အတွက် Plan ရှိထားသလိုပဲ အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် Plan တစ်ခုရေးဆွဲထားရပါမယ်။ Contingency Business Planning ဆိုတာက အကျပ်အတည်းများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ကို အာရုံစိုက်ပြီးရေးဆွဲထားတဲ့ Business Plan တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်ပြိုလဲစေနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ၊ ဖြစ်စဉ်တွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အကောင်းဆုံးဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို Business Contingency Plan ထဲမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားရပါမယ်။
Business Contingency Plan ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေက
မိမိအပါအဝင် ဝန်ထမ်းတွေ၊ Customer တွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအရးပေါ် အခြေအနေတွေမှာ ပေးနိုင်ရပါမယ်။
ဥပမာ- ရေဘေးမီးဘေးစတဲ့ ရန်သူမျိုး (၅)ပါး၊ ဝန်ထမ်းတွေနေမကောင်းဖြစ်တာ၊ စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျမှုတွေ ဖြစ်တာ အစရှိတဲ့အခြေအနေတွေပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ ရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ အခုမှစတဲ့ လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လည်ပတ်နေပြီးသားလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် Business Plan ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုသိသွားပြီမို့ ဒီမှာပဲရပ်နားပါရစေ။
Business AdviceHtet Khaing Hla Soe October 22, 2018 Business Advice